Curis | Laashin iyo Hal-abuur
Maxamed Muusa Nuur - February 19, 2021 0
Baadi goob baahi badan!!! Qaybta 22aad Kadib dhimashada Ciise doonyaale waxaa is bahaysi gaar ah yeeshay maryan, haajir, c/ rashiid iyo dhamaan kooxaha ganacsi ee xaashi la xulufo ahaa hadana hubaysnaa. Waxaa...
Maxamed Muusa Nuur - February 12, 2021 0
Baadi goob baahi badan!!! Qaybta 21aad Muuse wuxuu bilaabay in uu sii balaarsado awoodiisa gudaha iyo tan dibaddaba, xaashi saacadba saacadda ka dambaysa waxaa gacantiisa ka sii baxayay asxaab fara badan,...
Maxamed Muusa Nuur - February 5, 2021 0
Baadi goob baahi badan!!! Qaybta 20aad Waxaa soo caga dhigtay magaalada uu xaashi ku amar taagleeyo Muuse oo u soo muuqda awood aan sinnaba lagu celin karayn oo wax uu ka...
Maxamed Muusa Nuur - January 29, 2021 0
Baadi goob baahi badan!!! Qaybta 19aad Qoyska reer xaashi dhaqaal xumo daran ayaa kusii badanaysay taas waxay sababtay in wax badan ay waayaan hanti badan oo ma guurta ahna ay dib...
Maxamed Muusa Nuur - January 22, 2021 0
Baadi goob baahi badan!!! Qaybta 18aad Waxaa socday dadaal walba oo xaashi xabsiga looga soo saari karo, maryan waxay la wadaagtay c/ rashiid in telkeeda uu ka jeebsiibay nin ay tilmaan...
Maxamed Muusa Nuur - January 15, 2021 0
Baadi goob baahi badan!!! Qaybta 17aad Mahad oo jacayl u qabay ilhaan isla markaana ahaa nin dhaqan xun ayaa xooga saaray sidii uu ilhaan ku hanan lahaa isaga oo sirta guurkeeda...
Maxamed Muusa Nuur - January 8, 2021 0
Baadi goob baahi badan! Q-16AAD Qaraxaas wuxuu magaalada ka abuuray qalalaase iyo is waydiimo badan, dadka magaaladu sida badan waxay u shaqaynayeen Xaashi, taliye Daacad oo shir jaraa'id qabtayna wxuuu...
Maxamed Muusa Nuur - January 1, 2021 0
Baadi goob baahi badan! Q-15AADXulufo cusub ayey samaysanayeen reer Muuse, ujeedkooduna wuxuu ahaa in ay la wareegaan dhammaan boqortooyada Xaashi. Boqortooyada Xaashi ma ahayn mid lagu...
Maxamed Muusa Nuur - December 25, 2020 0
Baadi goob baahi badan! Q-14AAD Waxaa la soo gaaray waqtigii uu dhici lahaa arooska C / rashiid iyo Ilhaan, Xaflad weyn ayaa la...